Faahfaahin: Dagaalka ka socda Dowlad deggaanka Soomaalida | KEYDMEDIA ONLINE
Faahfaahin: Dagaalka ka socda Dowlad deggaanka Soomaalida
Waxaa xoogeystay 24-kii Saac ee la soo dhaafay dagaalka u dhexeeya Soomaalida degta Itoobiya iyo qowmiyadda Canfarta ee ka socda dhulka ay wadaagaan labada qowmiyad.
Sitti – Colaado soo jireen ah oo in muddo ah ka taagnaa galbeedka gobolka Siti ayaa is ku badalay gacan ka hadal iyo dagaal xooggan oo u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Canfarta, kuwoda dega Itoobiya.
Dagaalkaan oo aad u xooggan ayaa la soo warinayaa inuu sababay khasaaro xooggan oo dhimasho iyo dhaawac leh, waxaana si toos ah dagaalka kaga qeyb qaadanaya Ciidamada Dowlad degaannada Soomaalida iyo Canfarta.
Wakaaladda Reuters oo xiganeysa Saraakiil Itoobiyaan ah ayaa shaacisay in ugu yaraan 100 Qof ay ku dhinteen dagaaladda, waxaana badan dad xoolo dhaqato ah oo dega Garbo-ciise.
Dagaalka ayaa ku billowday duullaan ay ciidanka maamulka Canfartu ku qaadeen dad shacab ah oo ku dhaqan magaalo la yiraahdo Garbo-ciise oo ka mid Saddex magaalo oo ka tirsan Gobolka Sitti oo ay si gooni ah u degen yihiin Soomaalida.
Labada dhinac ayaa dagaalka guulo ka wada sheegatay waxayna Maamulka Dowlad deggaanka Soomaalida sheegeen in ay maxaabiis badan ka qabteen ciidamada Canfarta.
Dowlad degaannadu waxa ay isku eedeeyeen in uu mid kasta laayay dad shacab ah, bara kicin, degaanno la go’doomiyay iyo tuulooyin la gubay ayaa sido kale ka mid eedaha la is jeediyay.
Maamulka Canfarta oo qasaare xoogan uu garay dagaalkii shalay ayaa dalka Jabuuti ku eedeeyay in ay qeyn ka ahaayeen dagaalka.
Colaadda Gobolkaan ayaa salka ku heysa muran dhul, kadib markii Maamulkii TPLF uu dhulkaan oo ka tirsanaaa degaannada Soomaalida ku daray dhulka Canfarta.
Gobolkaan dagaalladu ka holcayaan oo ah gobol ku fadhiya dhul ballaaran ayaa xudduud la leh dalka Jabuuti, wuxuu xigaa dhinaca caasimadda labaad ee Itoobiya Diradhaba.
Ma aha markii koowaad ee dagaal ceynkan ah ka qarxo gobalkan, waxaana la xasuustaa dagaal qaraar oo 2018-kii labada dhinac ku dhex maray dhurka ay wadaagaan.